Shacabka Hargaysa oo Aragtiyo Kala Duwan Ka Dhiibtay Madaxtooyadda in La Raro, Kana Qayliyey ( Daawo Video) | KALSHAALE
Shacabka Hargaysa oo Aragtiyo Kala Duwan Ka Dhiibtay Madaxtooyadda in La Raro, Kana Qayliyey ( Daawo Video)
Hargeisa ( Kalshaale ) Shacabka magaalada Hargeisa ayaa aragti kala duwan ka dhiibtay Qorshe la doonayo in lagu Raro Madaxtooyadda Somaliland iyo Aqalka Baarlamaanka.
Qaaarkamid ah ayaa soo dhoweeyay, oo sheegay in halka ay ku taallo aysan ku Haboonayn Madaxtooyo, Sidoo kale Qaarkamid ah ayaa kasoo Horjeestay, waxayna sheegeen in loo baahan yahay in dhaqallahaasi lagu sameeyo wax Bulshada wax u taraya, “Waxayna qaar sheegeen inuu Reer gaar ah dhisanayo Madaxtooyadda hada “.
Adigaa Xamaraawi ahaan jirey oo xooga fahmahayo waxey Walaweyntu Ka fahmi weydo Qaldaamiimta.
Gartey raga dhahey Maalgelinta hala geliyo arimo kale oo shaqo abuur ah,
Kaaliin kuwaan leh Reerbaa loogeyn (sida daacaddaa) maxey ula jeedaan, maxey ka wadaan xataa hadey tahey Xaafad ay u badanyahiin Ciidegale.
-Soomaalida ilaa laga laayo odayaasha la soo shaqeeyey Kacaankii cudur qabiil ka biximahayo, Kan ugu da’ada weyn ayaa ugu qabyaalad badan.
– Boqor Buur-madow oo Madaxtooyadii u rarey Burco. Waqtigii Siilaanyo ayaan Feysal Waraabe ka maqli jirey anigaa Hargeysa ka xigo, hadda Waxaa Yimid Wacbuudhankii Isaaq.
Adeer shacab iyo axsaabta iyo siyaasiyiin intaba waanidinla hadlayaaye halka maanta looga taliyo jam somland maaha madaxtooyo? Waa guri taliye ciidan qaybeed degenaan jiray? Adeer halkii guriga madaxtooyada laga dhiso wax qiimo ah ma leh laakiin shacabka xisbiyada iyo wasiiraduba way bulaan? Umaduna haday garashada ka qabyoowdo duunyada daaqaysa waxba ma dhaamaan
In lagu farxay ahaydmadaxtooyo loo dhisayo jam somland? Laakiin umad garashada ka qabyowday yaa hagi karaya? Dawlad nimada qabyaaladaa idinkala wayn ( abidkiin dulmigaa ku jira noloshu waa idinku deelqaafe)
Waxaa isu kay qaban waayeydhibkay somaliya idila rabo ee dar eebe uga badbaadaysaan ? Iyo waxan aad ku mashquulsantihiin ee ah madaxtooyadan la dhisayo? Miyaan umadyahay aanu idinku jirin qof caqli u saaxiiba oo yidhaahda shicib baanu nahay jecel dawladnimadooda? Ma odhan kartaanoo qabyaaladdaa idinkala wayn ilaahii idin abuuray? Wiilasha yar yar ee mustaqbalka berri talada dalkan lala rabay oo ku muransan madaxtooyadu waa degaankii reer fulaan iyp fulaan maxay qarankan u qaban karaan berri? Waa ummad bukta oo bulta